Izihlangu zaBantwana abaqhelekileyo, izihlangu zamadoda, iFektri yabasetyhini yezihlangu | Izihlangu zeFowin
Imbuyekezo Shantou Fowin Footwear Ltd.
I-FOWIN ngobuchwephesha ivelisa ii-slippers, iimbadada kunye nezihlangu eziqhelekileyo.
Ukubonelela ngezona zihlangu zibalaseleyo zabantwana, izicathulo zamadoda
& izihlangu zabafazi.
Abaqulunqi bethu abali-10 banokwenza ngokwezifiso naziphi na izinto zethu, okanye benze imveliso entsha entsha ukusuka ekuqaleni ngokusekwe kubuchwephesha bakho.
I-ISO 9001: ifektri eqinisekisiweyo ka-2000.
Inemigca emibini yemveliso, iworkshop enye yenaliti kunye nemigca emibini yokupakisha.
Nika iinkonzo elungelelanisiweyo
I-Shantou Fowin Footwear Limited yasekwa ngo-2003. Sigxile ekuveliseni izilayidi kunye neembadada kulusu kunye ne-PU ene-EVA kunye nePVC. Ikhathalogu yethu ngoku ineempawu ezingaphezulu kwe-120 yoyilo lwezihlangu zamadoda, izihlangu zabafazi kunye nezihlangu zabantwana. Sisebenza i-16,000m2, i-ISO 9001: ifektri eqinisekisiweyo ka-2000 enemigca emibini yemveliso, indawo yokusebenzela yokubumba inaliti kunye nemigca emibini yokupakisha. Umthamo wethu wenyanga ziipara ezingama-150,000. Abaqulunqi bethu abali-10 banokwenza ngokwezifiso naziphi na izinto zethu, okanye benze imveliso entsha entsha ukusuka ekuqaleni ngokusekwe kulwazi lwakho.
Sineqela lenkonzo yabathengi elinabasebenzi abangama-20 abakwaziyo ukuthetha isiNgesi nesiJapan kwaye sineofisi yesebe eDubai yokujongana neeodolo ezivela kuMbindi Mpuma. Amaxesha akhokelayo okuhambisa ziintsuku nje ezili-15. Fumanisa ukuba kutheni abathengi abangaphezu kwama-30 kuMntla Melika, eYurophu, kuMbindi Mpuma nakwi-mpuma yeAsia beyithemba iFowin Footwear. Nxibelelana nathi namhlanje.
Abasetyhini kwiMidlalo yeSandal
Phezulu: pu Uluhlu: pu I-insole: pu Outsole: i-pvc Umbala: beige / igolide MOQ: 800prs Uluhlu lobungakanani: # 36-41 Into yokuhlawula: TT / LC I-port port: SHENZHEN / SHANTOU Ixesha lesikhokelo: kwiintsuku ezingama-35 Nxibelelana nam: fowin@fowin.cn
Abafazi beRivets Wedge Heel
Phezulu: pu Uluhlu: pu I-insole: ii-canvs I-Outsole: tpr Umbala: wh / bl MOQ: 800prs Uluhlu lobungakanani: # 36-41 Into yokuhlawula: TT / LC I-port port: SHENZHEN / SHANTOU Ixesha lesikhokelo: kwiintsuku ezingama-35 Nxibelelana nam: fowin@fowin.cn
Phezulu: pu Uluhlu: pu I-insole: pvc Outsole: i-pvc Umbala: luhlaza okwesibhakabhaka / br MOQ: 800prs Uluhlu lobungakanani: # 36-41 Into yokuhlawula: TT / LC I-port port: SHENZHEN / SHANTOU Ixesha lesikhokelo: kwiintsuku ezingama-35 Nxibelelana nam: fowin@fowin.cn
Abafazi iSlipper Stone
Phezulu: pu Uluhlu: pu I-insole: pu I-Outsole: tpr Umbala: luhlaza okwesibhakabhaka / br MOQ: 800prs Uluhlu lobungakanani: # 36-41 Into yokuhlawula: TT / LC I-port port: SHENZHEN / SHANTOU Ixesha lesikhokelo: kwiintsuku ezingama-35 Nxibelelana nam: fowin@fowin.cn
Eyilwe ngo-2003, yi
ishishini eligxile kwindibaniselwano yophuhliso, imveliso kunye nentengiso I-FOWIN ngobuchwephesha ivelisa ii-slippers, iimbadada kunye nezihlangu eziqhelekileyo. Ukubonelela ngezona zihlangu zingcono zamadoda, izihlangu zabafazi& izihlangu zabantwana.
Ngomgangatho njengowokuqala, ukwaneliseka kwabaxhasi yinjongo eqhubeka ngokulandela i-FOWIN, ngelixa ukuthembela kwabo kunye nenkxaso yabo kukuqhubela phambili okwenza uFowin aqhubeke. Fumana ukhetho lwamva nje lwezihlangu zabafazi, izihlangu zamadoda zesiko
& abantwana izihlangu kwiifowin izihlangu.
Izisombululo zesiko ze-OEM
Yintoni eyenza abathengi bethu
Ifoto yoMthengi uMboniso
UKUBA UNEMIBUZO EMININZI,